by pamusoro 18-05-07
vhiki yose, vatengi kubvira pose kuuya kushanyira China Red Flag Textile, Ukraine, Turkey, Russia, Moldova, Romania, Egypt, India, Indonesia, Vietnam, Brazil, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Venezuela, Mauritius etc. By munda vanoshanyira China Red Fl ...
Kubudirira Textile International Exhibition zvakanaka
Recently hafu gore, China Qingdao Tianyi Group Red Flag Textile michini kare kubatanidzwa Turkey Istanbul, Indonesia Djakarta, Pakistan Karachi, Egypt Cairo, Bangladesh Dacca, India Delhi uye Surat International Textile kuratidza. Meet zhinji shamwari akwegura uye vatengi itsva dzakawanda. Kusvika k ...
Egypt vatengi makuru, kare kutenga vanopfuura zana mhepo jeti kuenda apa. Thanks wake kutenda uye rutsigiro. nguva ino, 24 40-rutsoka midziyo vakaremerwa zvakare. kuenda apa zvose zviri tsika yakaitwa muchina, mhepo Tuck-muna mashandiro: Operation nokuchengetedza nyore, yakakwirira vakarongeka uye rokuponesa simba. Best anobatsirwei fung ...
Pashure China New Year mutambo, chokutanga nyanzvi kudzidziswa. Vashandi vose vanofanira kudzidzisa uye chete akaedzwa mureza pamwero anogona kupinda dzose basa. Kubva pamberi-mutsetse gungano vashandi mushure-basa nyanzvi mudonzvo, kusanganisira yokutengesa Sales, vashandi mari, unhu cheki varume uye zvichingodaro. W ...
The ITMA Asia + CITME 2016 dzakaitwa Shanghai, China kubva 21 kusvika 25 October paNational Exhibition uye Convention Center. Qingdao Tianyi Group Red Flag Textile Machinery CO., LTD vakabata hwokugadzira vachikurukurirana vanopfuura 1,000 vashanyi pamazuva mashanu Shanghai kuratidza. Vazhinji vakasuwa ...